Microsoft inoda kukwidziridza yako Windows 10 mudziyo wezviitiko zvekushandisa
Muri pano: musha / System Admin / Windows / Microsoft inoda kukwidziridza yako Windows 10 mudziyo wezviitiko zvekushandisa
ne Windows 10, iwe une dzinenge dzisina muganho nzira dzekugadzirisa. Uye Microsoft ikozvino iri kushanda pane chimwe chinhu chemunhu chinoratidza maturusi uye masevhisi zvichienderana nekuti unoronga kushandisa sei chako chishandiso.
Kwemwedzi mishoma yapfuura, Microsoft yanga ichiongorora mukati "peji rekushandisa" peji yeiyo Zvirongwa app iyo yaizobvumidza iyo kambani kugadzirisa yako Windows 10 mudziyo we "chaiwo mashandisiro kesi", senge basa rechikoro, varaidzo, mitambo uye zvimwe.
Zvinoenderana mareferenzi akaonekwa mukutarisa anovaka, Microsoft inoda kunzwisisa zviri nani marongero ako ekushandisa chishandiso chako uye nekukubatsira iwe kugadzirisa yako Windows ruzivo nekupa zano maturusi uye sevhisi.
Iyo Yekushandisa Yekushandisa ficha yava kurarama mukutarisa kwekutanga kune vamwe vashandisi uye isu takakwanisa kuigonesa mumuchina wedu chaiwo.
"Tora mazano akasarudzika ezvekushandisa uye masevhisi zvichienderana nekuti unoronga kushandisa sei kifaa chako," Microsoft yakataura muchirongwa cheMagadzirirwo.
Sezvinoratidzwa mune iri pamusoro skrini, vashandisi vachakwanisa kusarudza akawanda kesi dzekushandisa.
Iwe unozogona kupihwa matanhatu makuru ekushandisa zvikamu:
Unogona kusarudza akawanda mapoka. Semuenzaniso, unogona kusarudza "kutamba" uye iyo sisitimu inoshanda ichakubatsira iwe kuwana mitambo yausina kumbobvira watamba. Saizvozvowo, kana ukasarudza "varaidzo", unogona kutarisira kurudziro yezvishandiso nebasa rekuona mavhidhiyo, kutarisa webhu, uye kubatana pasocial media.
Nehurombo, hazvina kunyatsojeka kuti sei Windows 10 ichagadzirisa mudziyo wezvikamu zvakasarudzwa uye uko vashandisi vanozoona iwo mazano emasevhisi / maturusi muhurongwa hwekushandisa.
Gore rakapera, Microsoft yakawedzera peji "Yekushandisa Chishandiso" peji kunze kwebhokisi ruzivo (OOBE) skrini kubatsira vashandisi kumisikidza chishandiso chavo chitsva, saka zvingangoita kuti peji idzva iri muApp yeapps riwedzere kune OOBE skrini .
The post Microsoft inoda kukwidziridza yako Windows 10 mudziyo wezviitiko zvekushandisa yakatanga kutanga Windows tsva